【Imibhede emi-4 yangasese】 Isiteshi samahhala landa i-WiFi yamabhayisikili - I-Airbnb
【Imibhede emi-4 yangasese】 Isiteshi samahhala landa i-WiFi yamabhayisikili
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Hiroko
Ukucaciswa kwaleli gumbi lemibhede emikhulu.
Leli gumbi lingakwazi ukuhlalisa ubukhulu obungafika kubo bonke abantu abangu-4.· I-Wi-Fi yamahhala, ikhompuyutha, okomoya, amathawula, ikhofi kanye netiye lesi-Japanese. Nezinye izivakashi zihlanganyela ishawa, indlu yokugezela, i-microwave, iketela likagesi, isiqandisi, izitsha nokunye. Uhambo lweminithi elingu-1 ukusuka e-Don Quixote kanye nesitolo sezinto ezingu-24h. Kukhona indawo yokucima ukoma kwamakhelwane. Kunezitolo eziningi, ungadla i-ramen, i-Izakaya (njenge-pub), ama-udon noodles, amabhikawozi, amakhefi, iziphethu ezishisayo nokunye.
Ngaphakathi, njengendlu yasezintabeni, sinemibhede emibili etholakala emibhedeni emibili. Ubuningi babantu abangu-4. Isofa netafula, I-PC ye-WiFi yamahhala, I-air conditioning.
Amakamelo okugeza amabili kanye neToilet eyodwa kuyahlanganyelwa.
Imibhede engu-2, 1 usofa
Ziningi izitolo ngoba isendaweni engena emhumeni wezitolo.
Kuyimizuzu emi-2 ngezinyawo ukusuka e-Don Quixote(izimonyo, ukudla ngo-10am~3am) kanye ne-30sec ukuya ezitolo ezilula. Kukhona indawo yokucima ukoma kwamakhelwane. Kunezitolo eziningi ezingadla i-Ramen, i-Izakaya(njenge-pub), i-Yakiniku BBQ, i-Udon, i-Bakery, i-Cafe, iziphethu ezishisayo njll.